Mampanjaka ny fahefany ny Tompo Tsianjery : “… dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin’ny tongony Izy ” Efesiana 1 : 22a Rehefa nomena an’i Jesoa Kristy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, mbola hanompo an’iza indray ary isika? Mampandeha amin’ny fahefana ny Tompo * Matahora : Manaova hatrany izay mahitsy eo …
Continuer la lecture de « 0622Mahatoky »
Manavao ny Fanahy Masina Tsianjery : “Koa raha hianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy?” Lioka 11:13 Andriamanitra dia Fanahy Raha vao avy nandray ny famonjena nomen’i Jesoa Kristy antsika isika tamin’ny fankalazana ny …
Continuer la lecture de « 0522Mahatoky »
Mandresy ny fahafatesana ny Tompo Tsianjery “ Aza matahotra : Izaho no Voalohany sy Farany, dia Ilay velona; efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakizay …” Apokalypsy 1: 17b-18a Maro ny fivavahana manerana izao tontolo izao, fa ny hany mampiavaka antsika Kristiana, dia ny finoana fa efa maty Jesoa Kristy ary nitsangana sy naharesy izany …
Continuer la lecture de « 0422Mahatoky »
Mamaly amin’ny faharatsiana ny Tompo Tsianjery : « Fa ankehitriny kosa, hoy Jehovah, sanatria Ahy izany; fa izay manome voninahitra Ahy no omeko voninahitra, ary izay manamavo Ahy no ho afa-baraka. » ISamoela 2:30b Fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia tsara ary mpanao ny tsara. Isika rehetra dia samy mahalala izany. Andriamanitra tsy tia ratsy Izy …
Continuer la lecture de « 0322Mahatoky »